Torrens University Australia - Study in Australia
isifinyezo : YAKHO
Wasekelwa : 2012
abafundi (ngu.) : 6000
Ungakhohlwa discuss Torrens University Australia
Inyuvesi limise yilowo owayengungqongqoshe U.S. umongameli Bill Clinton ngesikhathi Adelaide Festival Centre ku 24 July 2014.
Siyakwamukela ku eyunivesithi yase-Australia global. Torrens University Australia kuletha fresh, yesimanje, careers-egxile kanye nombono global emfundweni ephakeme. Nakhu ukuthi kusho ukuthini kuwe.
Torrens University Australia enyuvesi umdlalo-ezishintsha, ihlose ukuhlinzeka eneziqu a ngamakhasimende namazwe omhlaba ikhono set ukuthi uzokwenza abe ukudla okubalulekile kunoma yimuphi umqashi.
Torrens unikeza sokufundela, izifundo undergraduate-postgraduate yonkana design, ibhizinisi, Ukuphatha iphrojekthi, ezokuphatha imidlalo, nezemfundo kanye nezempilo. Lezi izifundo alethwe ngokusebenzisa umndeni Torrens 'Amazing izikole eziningi ehlonishwayo kokusebenzisana; izikhungo okuholela ukuthi bonke ozibongayo baxhumene kakhulu embonini futhi babe benolwazi ngenxa yamashumi eminyaka ukufundisa e-Australia naphesheya kwezilwandle.
I Torrens isipiliyoni ngokujulile egxile ekuhlinzekeni uyindlela ngase omsebenzi evuza ezokwamukeleka ne zokuphila labafundi bethu.
Torrens unikeza ephumelelayo senyanga uhlelo evumela ukuthi izifundo okumele agcwaliswe zisabela ngokushesha okuningi kuka iminikelo yomphakathi enyuvesi. abafundi-time Okugcwele ngokuvamile bathembisa ukwenza 3 okutadisha nge ubude besikhathi 12 amasonto ngamunye, okuyinto eyenza kwaqedwa ngonyaka-3 impohlo degree ngaphakathi 2 iminyaka.
Torrens has campuses in Sydney, Adelaide, Melbourne and Brisbane, enikeza lula for inthanethi futhi abafundi campus ukusebenzisa campus izakhiwo lapho evumelana nabo, nge Sydney futhi Brisbane ephelele emva esishintshashintshayo amahora isifundo. Noma nini lapho kungenzeka, Torrens offers its courses online to provide convenient access to students who do not live in Australia’s capital cities.
Liphinde inikeza avenue enengqondo ukuze ochwepheshe esungulwe abavame ukwenza a trifecta umsebenzi, umndeni kanye izibopho zomuntu siqu isonto ngalinye. Torrens 'Touch-phuzu' olunzulu ngempelasonto sessions ukunikeza ithuba lokungenela njalo ngoba abafundi inthanethi ukuze ayohlangana nalo abafundisayo kanye nabo on campus futhi kokubuka shí izihloko watadisha ekhaya. Students nazo osekelwa nesigcawu state-of-the-art yokufunda online.
ukuyengelwa Swift kwezobuchwepheshe kanye okhulayo izinyunyana global ekutheni izwe lapho abathweswe iziqu bonke eyala kuyodinga amakhono neziqu ukuncintisana imisebenzi ezimakethe zomhlaba. Ukuhlanganyela ngokusebenzisa ubuchwepheshe kanye ngokusebenzisa engqondweni komhlaba kungenye yezinto nokuyigugu Torrens '. indawo Torrens 'e iLaureate International Universities kuqinisekisa ukuthi abafundi beqede izifundo ezingaphezu kuka-ngokwezinga elithile, iziqu kusukela inethiwekhi ngobukhulu imfundo emhlabeni, isilungele whatever inselele emhlabeni Ufaka indlela yabo.
The go-ahead for the new university was given by the South Australian Cabinet following Premier Mike Rann’s negotiations in Australia and in Cancun, Mexico, with Laureate Chairman Douglas Becker and Chancellor Dr Michael Mann. Honorary Laureate Chancellor and former US President Bill Clinton publicly endorsed the Australian project.
Uyafuna discuss Torrens University Australia ? Noma yimuphi umbuzo, imibono noma ukubuyekezwa
Izithombe: Torrens University Australia Facebook ezisemthethweni
The University of Notre Dame Australia Fremantle
UJames Cook University eliseTownsville